Etu esi eji SMS merie Lovehụnanya, N’edu, Nnata | Martech Zone
Izi ozi ederede abụwo ntọala nke ihe ịga nke ọma anyị na anyị ire ala na ụlọ ikpo okwu. Mgbe ihe onwunwe nwetara onye ọbịa, ha na-arịọ maka ozi site na ederede sitere na akara anyị biputere na ahịhịa ha. Mgbe enyere nzaghachi na njem mkpanaka na ozi ụlọ ahịa, a na-agwa onye nwe ụlọ ozugbo ma nwee ike ịkpọ onye ọbịa ma ọ bụrụ na enyemaka dị ha mkpa. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ndị ọrụ anyị na-eji usoro ahụ eme ihe ngwa ngwa.
Ederede ahia nwere 98% emeghe ọnụego, ọnụego nzaghachi 45% na ọnụego ntụgharị maka ndị na-eduga bụ ndị e zigara ozi ederede atọ ma ọ bụ karịa mgbe kọntaktị mbụ ahụ bụ 328%, ụlọ ọrụ dum. Read na-agụ ikike… ma e jiri ya tụnyere ndị ahịa ahịa ndị ọzọ, ozi ederede bụ eluigwe na ala n'ofe ngwaọrụ mkpanaka ọ bụla. Ọ dịghị mkpa maka imewe, mmepe ma ọ bụ mgbanwe ndị ọzọ - naanị zipu ma chere maka nzaghachi! Naanị jide n'aka na ị ga-arụ ọrụ nwere aha ọrụ ozi ederede ma nweta ikikere mgbe niile. N'adịghị ka ndị na-ajụ ndị ọzọ okwu, ahụhụ maka iji ozi ederede na-eme ihe buru ibu.
Download akụkọ Leads360 zuru ezu, Ederede ederede maka ntụgharị ahịa ka mma, ma mụtakwuo banyere otu esi eji ozi ederede nke ọma na usoro ire ere
Tags: SMSSMS ahịaederede ederede ahiaozi ederedetexting